Ucwaningo Lwamabanga Aphambili Luguqula Kanjani Ukushintshwa Kwabaholi Bemboni | Martech Zone
Ucwaningo Lwasisekelo Luguqula Kanjani Amakhampani Abaholi Bemboni
Lwesine, Disemba 5, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Abathengisi baphendukele kokumaketha kokuqukethwe, imithombo yezokuxhumana, ukukhangisa komdabu kanye namanye amasu amaningi wokumaketha ukwakha ubudlelwano nezithameli eziqondiswe kubo. Ochwepheshe bezokukhangisa bahlala befuna amasu namasu amasha wokwakha igunya nobunikazi bomkhiqizo wabo. Enye indlela eyingqayizivele lapho izinkampani eziningana zikhombisa isimo sazo njenge abaholi bezimboni ngokwakha okuhlukile ucwaningo oluyinhloko lokho kuthembekile futhi kuwusizo kubafundi babo.
Incazelo Yocwaningo Lwemakethe Eyinhloko: Imininingwane evela ngqo emthonjeni – okusho ukuthi, amakhasimende angaba khona. Ungazihlanganisela lolu lwazi noma uqashe omunye umuntu ukuthi akuqoqele izinhlolovo, amaqembu okugxila kanye nezinye izindlela. Incazelo ngo-Entrepreneur
UJanna Finch, Umphathi Wokuhlela ku Iseluleko se-Software, inkampani yocwaningo enikezela ngezibuyekezo zamahhala zesoftware yokumaketha, muva nje kuthuthukiswe umbiko lokho kunikeza izibonelo ezine zezinkampani ezisetshenzisiwe ucwaningo oluyinhloko njengecebo lokubeka uphawu ngempumelelo. Sinqume ukuhlangana noFinch bese sibona ukuthi yiluphi ulwazi olwengeziwe okufanele abelane ngalo ngokusebenzisa leli su. Nakhu obekumele anikele ngakho:
Ucwaningo oluyinhloko lungasiza kanjani ukwakha igunya lomkhiqizo?
Abakhangisi bayazi ukuthi imininingwane yokushicilela eyabiwe kaninginingi ayanele ukwandisa ukusebenza kosesho noma ukuthuthukisa ukufundwa okukhiqize ukuhola nezinguquko. Lokhu akuyona iresiphi yokuphumelela, futhi ngeke hlukanisa umkhiqizo wakho kusuka kweminye imikhiqizo.
Ikhwalithi ephezulu, okuqukethwe kwasekuqaleni kuyindlela enhle yokuphakama ngaphezu komsindo wabancintisana nabo futhi ucwaningo oluyisisekelo lufanelana kahle nomthethosivivinywa. Ucwaningo oluyisisekelo, lapho lwenziwa kahle, lunikeza amathemba akho okuqukethwe okuhlukile nokungatholakali kwenye indawo ngoba kusha.
Ukushicilela ucwaningo oluyinhloko kunezinzuzo ezibalulekile:
Okuqukethwe uyabiwa: Abantu bahlala befuna okokusebenza okusha nokujabulisayo futhi bagwema okuqukethwe okusatshalaliswe izikhathi ezingamakhulu ngama-spin ahlukile. Ucwaningo lwangempela lunethuba elingcono lokuthakazelisa nokusetshenziswa, okusho ukuthi abantu bazoba sethubeni lokulithumela i-tweet, njengalo, baliphine noma babhale ngalo.
It kuqokomisa igunya lakho ngale ndaba: Ukwenza iphrojekthi eyinhloko yocwaningo akuyona umsebenzi olula. Kudinga amahora amaningi omuntu nokuzinikela. Abantu bayakubona lokhu futhi bayazi ukuthi uma inkampani yakho ibizimisele ngokwanele ukwenza iphrojekthi enkulu yocwaningo, kungenzeka ukuthi unegunya kule ndaba.
Igunya lokwakha nalo linalo Imiphumela ye-SEO. Lapho abantu abaningi bethembela kumkhiqizo wakho futhi behlonipha okuqukethwe kwakho, kulapho impahla yakho izokwabiwa futhi ixhunywe kakhulu kuyo. Izinjini zokusesha zinquma ukuthi uma ngabe okuqukethwe kwabiwe kakhulu, kungenzeka ukuthi kube ngumthombo obalulekile. Uma i-Google ibona lokhu kuhlangana kokuqukethwe kwakho, umkhiqizo wakho uzophatha amandla amaningi bese uqala ukubonakala uphakeme kuma-SERP futhi abantu abaningi bazovakashela isiza sakho. Izivakashi eziningi zivame ukusho ukuguqulwa okuningi.
Kungani ukwakha umkhiqizo onegunya ku-Intanethi kubalulekile kumabhizinisi?
Abantu bathambekele ekufuneni izinkampani ngoba bathembela uphawu lwabo, noma banikezela ngolwazi abebelufuna, noma babe nokuhlangenwe nakho okuhle kwangaphambilini. Ngokwakha igunya lomkhiqizo elengeziwe, futhi wakha ukwethembana. Lapho abantu bethembela enkampanini yakho futhi bekubheka njengomholi, ekugcineni kungaholela ekuholeni nasekungeniseni okuningi.
Lokhu kubaluleke kakhulu kwi-Intanethi. Lapho umkhiqizo wakho unegunya ngokwengeziwe, maningi amathuba okuthi uzokleliswa kakhulu emiphumeleni yosesho. Lapho isikhundla sebhizinisi lakho siphezulu ekhasini lemiphumela yosesho lwe-Google, umkhiqizo wakho ubonakala ngokwengeziwe, futhi ukubonakala okukhulu kusho imali eningi. Kalula nje, akekho noyedwa owake athenge kwiwebhusayithi angayitholi.
Ngabe sikhona isibonelo somkhiqizo osebenzise ngempumelelo lelisu lokumaketha?
Kunezinkampani eziningana ezisebenzise ngempumelelo ucwaningo oluyisisekelo ukwakha igunya lomkhiqizo wazo. Enye inkampani ikakhulukazi ibe nempumelelo emangalisayo ekusebenziseni leli su - I-Moz. UMoz ubelokhu enegunya ekusebenziseni izinjini zokusesha (SEO) cishe iminyaka eyishumi. Kodwa-ke, emzameni wokugcina isimo sabo njengondunankulu wokuya kumthombo wezinsizakusebenza ze-SEO, nabo babheka ocwaningweni oluyinhloko.
IMoz ihlolisise abezimakethe abaphezulu be-SEO abayi-120 ukuqoqa imibono yabo ngaphezu kwezici ezingama-80 zezinjini zokucinga. IMoz iqoqe imininingwane futhi kuthuthukiswe amagrafu afundeka kalula nezifinyezo zedatha ukufundeka okuphezulu nokwabiwa. Isinqumo sabo sokuphendukela ekufuneni okuyisisekelo siphumelele ngendlela emangalisayo ngoba banikeze abathengisi be-SEO ucwaningo oluwusizo nolunokwethenjelwa okungekho omunye umuntu angalunikeza. Lo mzamo ubathole cishe izixhumanisi ezingama-700 kanye namasheya angaphezu kuka-2,000 XNUMX wezenhlalo (nokubala!). Lolu hlobo lokubonakala alugcini ngokwandisa igunya lomkhiqizo wabo, kodwa futhi luqinisa idumela labo njengomthombo owaziwayo wolwazi lwe-SEO nemikhuba emihle.
Yikuphi ukusikisela onakho kwezinye izinkampani ezicabanga ukusebenzisa ucwaningo oluyinhloko ukwakha igunya lomkhiqizo wazo?
Qonda ukuthi ukudala ucwaningo olusezingeni eliphakeme lekhwalithi kuthatha isikhathi esiningi nomzamo omkhulu. Njenganoma iyiphi iphrojekthi enkulu, isu nokuhlela kubalulekile. Nayi imibuzo embalwa okufanele uzibuze yona ngaphambi kokuthi uqale ukuqoqa idatha:
Yini engifuna ukuyithola?
Ngingaluqoqa kanjani lolu hlobo lolwazi? Zibuze ukuthi ngabe indlela engcono yokuqoqa imininingwane ukudala inhlolovo ongabelana ngayo, noma ukuxoxisana neqembu elincane lochwepheshe, noma ukuthi ungakwazi yini ukuqoqa imininingwane ngokwenza imibono yakho.
Ukutholakala kwalo msebenzi kuzoba wusizo kanjani kumakhasimende ami noma kubalaleli bami? Ungadabula yonke iminyakazo nokusebenza kanzima kokuqoqa idatha yekhwalithi, kepha uma kungasizi, kuthakazelisa futhi kwabelwane ngakho kalula, kuzosiza kanjani ukwakha igunya lakho?
Uma uphendula le mibuzo usuvele usuphambili kwabancintisana nabo abaningi.
Wake wasebenzisa ucwaningo oluyinhloko ukukhulisa igunya lomkhiqizo wakho? Sicela wabelane ngendaba yakho noma imibono ngezansi.
Tags: UJanna FinchmozUcwaningo Lwemakethe Eyisisekeloucwaningo oluyinhlokoucwaningoiseluleko se-software
I-WordPress: Izizathu ezi-3 zokufaka Jetpack Manje!
Njengoba Kwabikezelwa, Ukuthengiswa Kweholide Kwe-2013 Kwaya Iselula